Podcast 10 × 02: Iyo nyowani iPhone iri pano Apple Tarisawo | Ndinobva mac
Vhiki rino takatumira # podcastapple kunonoka kudemba kunonoka. Chero zvazvingaitika, vateveri vakatoteerera podcast kana kuona vhidhiyo yeYouTube pane yedu chiteshi, ino yave nguva ino post-yakakosha.
Iyo Cupertino kambani yakaisa nyama yese pane iyo grill Chitatu chekupedzisira, Gunyana 12 kutanga chirevo chitsva kuApple Park. Mune ino kesi iyo Apple Watch Series 4 uye zvese zvitsva zvayo zvakavhura masikati uyezve iyo iPhone XS, XS Max uye XR yakatevera. Pane podcast takataura nezvazvo zvese nechikwata chose masikati azere.
Yakanakisa yechinyorwa chakapfupikiswa mune ino yechipiri podcast yemwaka wegumi. Semazuva ese rangarira kuti iwe unogona govana mibvunzo yako, kusahadzika kana mazano pasocial network Twitter uchishandisa iyo hashtag #podcastapple kana kusiya mhinduro yako muchinyorwa chino. Zvakare rangarira kuti kana iwe uchida kutevera zvese zvikamu zvemwaka uno wepfumbamwe unofanira kungoita Nyorera kune yedu iTunes chiteshi.
Asi kana, pane kudaro, unosarudza YouTube pane nakidzwa neimwe podcast pavhidhiyo, iwe unofanirwa kungomira ne chiteshi chedu uye nyorera, kuitira kuti pese paunoonekwa vhidhiyo yekupedzisira uchagamuchira chiziviso kuburikidza neakaundi account yako. Ndinokutendai mese nekuvimbika kwenyu muzviratidziro zviripo, nezuro manheru vashoma vedu takadzungaira pakati pehusiku uye tiri kuita zvirinani uye zvirinani. Kwazisai vese uye kusvika nguva inotevera!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Podcast 10 × 02: Iyo nyowani iPhone iri pano, uye iyo Apple Tarisa futi
Iwe unogona ikozvino kuchengetera iyo Apple Watch Series 4